Amandla eziqukethwe emathunjini omhlaba. amandla ihambise imishini umhlaba
Nge ekukhuleni komphakathi kanye kumiswa abantu bengase baqale ukubheka zanamuhla futhi ngesikhathi esifanayo ngezindlela engabizi yokuthola amandla. Ukuze wenze lokhu namuhla zakhelwe iziteshi ezahlukene, kodwa ngesikhathi esifanayo kabanzi amandla eziqukethwe emathunjini omhlaba. Yini lokho? Zama ukuqonda.
Kakade kusukela igama kuyacaca ukuthi kuba subsurface ukushisa. Ngaphansi uqweqwe kuyinto magma ungqimba ekubeni-ilangabi ketshezi silicate ncibilika. Ngokocwaningo olwenziwa, ikhono amandla amandla ukushisa kuyinto izinqolobane okuningi ephakeme emhlabeni Igesi yemvelo ne-petroleum. Magma kuziwa kwamanzi - udaka olushisayo. Futhi umsebenzi enkulu siyenzeka ezingqimbeni zomhlaba, okuyizinto imingcele khona izingqimba zomhlaba, kanye lapho uqweqwe libhekene ubuhlakani. amandla ihambise imishini yomhlaba etholwe kanje: Lava nemithombo yamanzi le planethi nabo, futhi umphumela waba ukuthi amanzi iqala ukufudumeza ngendlela ephawulekayo. Lokhu kuholela ukuqhuma a isiphethu samanzi ashisayo, ukwakheka okubizwa ngokuthi amachibi ashisayo nemisinga kwamanzi. Eqinisweni asho into yemvelo, izakhiwo zazo kabanzi njengendlela umthombo ongashi amandla.
geothermal imithombo Artificial
Amandla equkethwe phansi, okumele asetshenziswe ngokuhlakanipha. Ngokwesibonelo, kukhona umbono yokudala boilers ngomshoshaphansi. Ukuze wenze lokhu, kudingeka sokuprakthiza ezimbili amaqula ukujula esanele ixhunywe ezansi. Okungukuthi, kuvela ukuthi cishe kuzo zonke izingxenye bezwe ingatholakala geothermal amandla ngendlela yezimboni: ngokusebenzisa kahle uzobizwa akhishwa ngamanzi abandayo ku kwesigubhu, kanye nesesibili - walulama amanzi ashisayo noma isitimu. Artificial ukushisa imithombo kukhona inzuzo futhi enengqondo, uma ukushisa okuholela uyoveza amandla. Isitimu kungenziwa iqondiswe ophephela ugesi, okuyinto uzobe kukhiqizwa ugesi.
Yiqiniso, ukushisa ekhethiwe - kungcono kakhulu uma kuqhathaniswa nakho lokho kukhona esitokisini esivamile. Kodwa ingabe kufanele sikhumbule ukuthi ukushisa ezijulile uzobe avuselelwe zikhathi ngenxa izinqubo zokuwohloka enemisebe, kokucindezelwa yamadwala, amaminerali zihlanganisa. Njengoba izazi zithi, uqweqwe aqoqana ukushisa, isamba izikhathi 5000 ukubaluleka calorific emibilini ezimbiwa phansi yomhlaba wonkana. It kuvela ukuthi ngesikhathi ekusebenzeni ezifana iziteshi geothermal eyayenziwe wadala kungenzeka angenamkhawulo.
Imithombo, ihlinzeka amandla geothermal cishe akunakwenzeka asetjenziswe. Zikhona emazweni angaphezu kuka-60 emhlabeni wonke, nezintaba-mlilo eziningi eliwumhlaba phezu Insimu Ring of Fire. Kodwa umkhuba kuvela ukuthi imithombo komhlaba ezindaweni ezihlukahlukene emhlabeni zihluke ezakhiweni zabo, okungukuthi, nezinga lokushisa, usawoti, igesi Ukwakheka, asidi nokunye.
Neziphethu - zamandla emhlabeni, okuyinto izici ukuthi zingabantu ngezikhawu ezithile ichitha amanzi abilayo. Ngemva kokuqhuma, ichibi liba mahhala kusukela amanzi, ezansi uzophawula isiteshi, okuyinto iya ekujuleni phansi. Neziphethu njengoba imithombo yamandla esetshenziswa izifunda ezifana eKamchatka, Iceland, eNew Zealand nase-Nyakatfo Melika, kanye iziphethu olulodwa atholakala kwezinye izindawo.
ingabe amandla Nivelaphi?
Ngisondelene kwamanzi namanje hot kusukela magma odlule. Kule ukuma amagesi futhi intuthu okuyinto phakamisa futhi bandise waphuka. Ezize ne komhlaba, babangela Ukushisa zabo, babuyele ku amanzi ashisayo lapho izinto eziningi siphela. Lokhu amanzi ukhululeka ebusweni ngesimo imithombo ehlukahlukene komhlaba, iziphethu ezishisayo, imithombo amaminerali, iziphethu nokunye. Ngokusho ososayensi, ama-emathunjini esishisayo umhlaba - emgodini noma ikhamera exhunywe emihubheni, imifantu kanye neziteshi. Bamane ukugcwalisa amanzi enhlabathini, futhi sisondelene kakhulu nabo zitholakala ekhukhwini magma. Ngakho ngokwemvelo kwakhiwa energy ezishisayo kanye umhlaba.
Inkambu kagesi Zomhlaba
Kukhona ngokwemvelo kungenye umthombo wamandla kagesi, esibonakala by kugcineke, nobungane kwemvelo, lula ukusetshenziswa. Nokho, kuze kube manje lo mthombo kuphela lafundvwako futhi ekusebenzeni. Ngakho, amandla ezingaba Zomhlaba imbozwe ensimini yayo kagesi. Thola amandla ngale ndlela kungenzeka ngesisekelo ukutadisha imithetho eyisisekelo electrostatics netimphawu emkhakheni kagesi Zomhlaba. Eqinisweni, iplanethi yethu kusukela iphuzu Ngenxa kagesi - capacitor eyindilinga likhokhelwa ukuba volts 300 000. sphere wakhe wangaphakathi has a icala ezimbi, kanti yangaphandle - the ionosphere - omuhle. emkhathini woMhlaba kuyinto yisivikelo. Ngalo mhlatshelo, kukhona njalo ion futhi Ukubika Inkinga YeWindows imisinga ukuthi ukufinyelela amandla izinkulungwane eziningi amperes. Nokho, umehluko ezingaba phakathi electrode akuyona encishisiwe.
Lithi imvelo kukhona generator, ogama indima iwukuba njalo libuyisele amanzi ukuvuza amacala kusukela amapuleti capacitor. Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe generator ezinjalo kanye nezenzo njengoba Amandla kazibuthe omhlaba, ukujikeleza kanye iplanethi yethu ku solar umoya ukugeleza. amandla uzibuthe amasimu Umhlaba It ingatholakala nje ngokuxhuma generator ukuze umthengi amandla. Ukuze wenze lokhu, udinga ukwenza ukufakwa phansi okuthembekile.
Njengoba labantu iplanethi yethu iye kokukhulumela phezulu, sidinga amandla ezingasho ukunikeza sabantu. Amandla equkethwe phansi, zingase zishintshe kakhulu. Ngokwesibonelo, kukhona kubakhiqizi abakhiqiza imithombo energy: emoyeni, lilanga kanye namanzi. Ziyakwazi Isizalo ihlanzekile, kodwa ngoba ingasetshenziswa ngaphandle kokwesaba umonakalo emvelweni.
Le ndlela iye yasetshenziswa amakhulu amaningi eminyaka. Namuhla, ukwakha lenqwaba neziyingi lapho amanzi esetshenziswa ekuphehleni ugesi. Ingqikithi yale mshini wezenzo ilula: bedle emfuleni ujikelezisa ophephela amasondo, ngokulandelana, amandla amanzi ashintshwa aba kagesi.
Namuhla, kukhona inani elikhulu Hydropower, okuyinto ukuguqula amanzi ukugeleza kwamanzi zibe amandla kagesi. Isici le ndlela wukuthi izinsiza amandla zivuselelwa, ngokulandelana, izakhiwo ezifana abe eziphansi. Yingakho, naphezu kweqiniso lokuthi ukwakhiwa kwalesi HPP uqhutshwa isikhathi eside, futhi inqubo ngokwalo kuyabiza kakhulu, kodwa lezi zakhiwo kakhulu ziphumelela kangcono izitshalo amandla.
Ugesi wemisebe yelanga yiwona: yesimanje futhi eziphambili
Ugesi wemisebe yelanga yiwona kuveza solar panel, kodwa nobuchwepheshe besimanje evumela ukusebenzisa izindlela ezintsha ukwenza lokhu. enkulu kunazo zonke emhlabeni -solar amandla plant kuyinto uhlelo eyakhelwe California ehlane. Ihlangabezana ngokugcwele amandla emakhaya 2000. Ukwakhiwa usebenza kanje: kusukela izibuko kubonise imisebe yelanga, lapho ithunyelwa kubhayela emaphakathi ngamanzi. It amathumba is ibe umusi ukuthi ushayela a ophephela. Yena, ixhunywe ne-generator kagesi. Umoya lungasetshenziswa njengoba amandla, okusenza sibe umhlaba. I umoya lishaya i useyili uzungeza esigayweni. Futhi manje ingasetshenziswa ukwakha kudivayisi ezokwenza ugesi. Izungezisa ikhaba umoya ephendulwa, ke ushayela kushaft ophephela, nakho kuhambisana ne-generator kagesi.
Amandla zangaphakathi Zomhlaba
Yena ubonakele ngenxa izinqubo eziningana, abaluleke kakhulu zazo - futhi accretion ka-radioactivity. Ngokusho ososayensi, ukwakheka Earth isisindo salo wayeneminyaka engamashumi eziyizigidi ezimbalwa, futhi kwenzeka ngenxa ukwakheka planetesimals. Bona banamathelane, ngokulandelana, wakhula mass enkulu Earth. Ngemva iplanethi zethu zaqala ukugcwala Ziningi yesimanje, kodwa kwakusafanele kungekho emoyeni, ngokukhululekile falling Meteor nemizimba elisemkhathini. Le nqubo ibizwa nje ngokuthi accretion, futhi kwaholela yokuthi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana amandla abalulekile okudonsa izinto. Futhi yobukhulu enkulu isidumbu siwela emhlabeni, aba maningi ubungako bamandla ikhishwe, eziqukethwe yembathani Earth.
Lokhu kuphakanyiswa okudonsa kuye kwaholela iqiniso lokuthi izinto ziya wakubo: impahla esindayo umane waminza, futhi wahamba ukukhanya oluyingozi. Ukwehlukanisa futhi nomthelela kwindlela Kwabiwa ezengeziwe wamandla adonsela phansi.
Ukusebenzisa amandla omhlaba singenzeka ngezindlela ezahlukene. Ngokwesibonelo, lapho kwakhiwa enuzi izitshalo amandla lapho energy ezishisayo ezikhishwe ukubola izinhlayiya ezincane kunazo zama-athomu ndaba. I-fuel main kuyinto uranium, okuyinto kuqukethwe ungqimba lomhlaba. Abaningi bakholelwa ukuthi le ndlela energy yilona ethembisayo, kodwa ukusetshenziswa kwalo lihlotshaniswa eziningi izinkinga. Okokuqala, i-uranium ikhipha imisebe ehlasela ubulala zonke izinto eziphilayo. Ngaphezu kwalokho, lapho izidakamizwa uthola enhlabathini noma emkhathini, kukhona inhlekelele real man-made. Imiphumela edabukisayo le nhlekelele yaseChernobyl sithola namuhla. Ingozi iba yokuthi kwemfucumfucu enemisebe yenuzi zingayisongela zonke izinto eziphilayo isikhathi kakhulu, isikhathi eside kakhulu, sekuyizinkulungwane zeminyaka.
isikhathi okusha - imibono emisha
Yiqiniso, abantu abayeki lapho, futhi minyaka yonke imizamo okwandisa ukuthola izindlela ezintsha ukuze ukhiqize amandla. Uma amandla yokushisa yomhlaba etholwe nje, ezinye izindlela akuzona ngakho elula. Ngokwesibonelo, njengoba umthombo energy kungenzeka ingasetshenziswa biogas, okuyinto etholwe imfucuza elibi. Ingasetshenziselwa ukufudumeza amakhaya namanzi bafudumale.
Bayanda, iziteshi zikagesi olwandle Kwakhiwa, lapho emadamini ezifakiwe futhi abaphehla ugesi ngaphesheya emlonyeni imizimba amanzi, okuyinto eliqhutshwa nokwehla, ngokulandelana, ukuthola ugesi.
Burning udoti, sithola amandla
Enye indlela, okuyinto kakade liyasetshenziswa Japan - ukudalwa incinerators. Namuhla akhiwa ngezindlela eNgilandi, Italy, Denmark, eJalimane, eFrance, eNetherlands ne-United States, kodwa kuphela eJapane, lezi amabhizinisi azisetshenziselwa inhloso yazo, kodwa futhi ugesi. izimboni Local ashisiwe 2/3 imfucuza, kanye namafemu anemisila umusi abaphehla ugesi. Ngakho, nikeza ukushisa kanye nogesi endaweni ezungezile. Ngesikhathi esifanayo izindleko ukwakha ibhizinisi ezifana inzuzo okuningi kuka ukwakha ezishisayo amandla plant.
Kubukeka ithemba okuyenga ngaphezulu usebenzisa ukushisa Zomhlaba, lapho izintaba-mlilo tibheke. Kulokhu, asikho isidingo ushone ekugxileni kakhulu, ngoba ngisho nalapho ka 300-500 amamitha ukujula izinga lokushisa ingaphezu abilayo okungenani kabili.
Kukhona indlela yokukhiqiza ugesi njengoba hydrogen amandla. Hydrogen - elula elula amakhemikhali element - angabhekwa uphethiloli enhle ngoba kukhona lapho kukhona amanzi. Uma i-hydrogen usha, kungenzeka ukuthola amanzi ubola kube umoya-mpilo ne-hydrogen. Hydrogen ilangabi ngokwayo okungenangozi okungukuthi, umonakalo emvelweni angeke zisetshenziswe. Isici yalesi isici wokuthi unesikhundla esiphakeme calorific value.
Yini esikhathini esizayo?
Yiqiniso, amandla kazibuthe Zomhlaba, noma ukuthi yiziphi ikhiqizwa enuzi izitshalo amandla, ayikwazi ngokugcwele ukuhlangabezana zonke izidingo lwesintu, ezimila njalo ngonyaka. Nokho, ochwepheshe bathi akukho isizathu imizwa uphethiloli umnotho iplanethi kusadingeka ngokwanele. Lapho esetshenziswa imithombo emisha bayanda ehlanzekile futhi ivuselelwe.
Kusalokhu inkinga ka ukungcoliswa kwemvelo, futhi ukhula kakhulu okusheshayo. Inani eziyingozi kwekhabhoni imiqulu, ngokulandelana, umoya esiwuphefumulayo kuyalimaza, amanzi ukungcola enobungozi, kanye inhlabathi kancane kancane mpilo. Yingakho kubaluleke kangaka ngesikhathi esifanele ukufunda lesi simanga, amandla Emhlabeni ukubheka izindlela zokunciphisa ukufuneka zokubasa ezimbiwa phansi kanye nokusetshenziswa enkulu ehlukile imithombo energy.
Umhlangano omkhulu kunayo yonke i-Pacific Gulf
Awufuni i suku okwejwayelekile isimiso, futhi omuhle ngempela? Kulula kanjalo nje!
Indlela ukulungiselela umhlangano? Indlela ukubamba kahle umhlangano?
Kuyini - isimo sezulu e-Canada?
Indlela oda "Aliekspress" eCrimea: imfundo
Kanjani ukuze ususe ukuvikeleka bhala
Ikhodi Ezezindlu: MCD iseluleko. Amandla ICM Board
Anime Izinhlobo: ukusuka kokulula kuya kokulukhuni
Irina Savina: Biography, ifilimu umsebenzi nomkhaya